Screen ​ကို password ​ဖြင့် lock ​ချ​ထား​လို့​ရ​တဲ့ matrix screen lock 2.0 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Screen ​ကို password ​ဖြင့် lock ​ချ​ထား​လို့​ရ​တဲ့ matrix screen lock 2.0
screen saver ​နဲ့ lock ​ချ​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ။ ​ကို​က​အ​ပြင်​ခ​ဏ​သွား​ချင်​ရင် screen ​ကို password ​ပေး​ပြီး lock ​ချ​သွား​လို့ ​ရ​ပါ​တယ် .. ​ကဲ​ဒေါင်း​ချင်​ရင် ​အောက်​မှာ ​ဒေါင်း​လော့​လုပ်​လိုက်​ပါ .. ​ကို​က ​ကိ​စ္စ​တစ်​ခု​ရှိ​လို့ ​အ​ပြင်​ကို​သွား​ချင်​တယ် . Download ​က​လဲ ​လုပ်​ထား​တယ် ​မ​ပြီး​သေး​ဘူး . ​ဒု​က္ခ​ပဲ​ဆို​ပြီး ​ညည်း​နေ​တဲ့ ​သူ​ငယ်​ချင်း​များ​အ​တွက်​ပါ . ​သူ့​ဟာ​သူ download ​လုပ်​နေ​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​တစ်​ချို့ screen locker ​တွေ​ဟာ Lock ​တော့​ချ​ပေး​တယ် . ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အင်​တာ​နက်​ကို ​ရပ်​ထား​လိုက်​တယ် . ​ဒါ​လေး​က​တော့ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ် .
(၁) Download ​လုပ်​ထား​တဲ့ file ​ကို install ​လုပ်​လိုက်​ပါ .
(၂) ​ပြီး​တာ​နဲ့ start Bar ​က ​ညာ​ဖက်​မှာ x ​ပုံ​စံ​လေး​နဲ့ icon ​လေး​ကို ​တွေ့​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ် .
(၃) Rightclick ​နှိပ်​ပြီး setpassword ​ကို​ပေး​လိုက်​ပါ .
(၄) ​ကို​ပေး​ချင်​တဲ့ Password ​ကို​ပေး​လိုက်​ပါ .
(၅) ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ကို​အ​ပြင်​ကို​သွား​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​အ​ခု​န​က X icon ​လေး​ကို ​တစ်​ချက်​က​လစ်​လိုက် ​တာ​နဲ့ lock ​ကျ​သွား​လိမ့်​မယ် . ​ကဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​ပါ​စေ​ဗျာ ..
ifile | Mirrorcreator | Minus | Mediafire
peoplelike March 26, 2012 at 1:10 PM
​ကျေး​ဇူး​ပါ ​အစ်​ကို ​နောက်​ကို​လဲ ​အ​လန်း​တွေ​တင်​ပေး​ပါ​ဦး​နော်...
thihazaw March 27, 2012 at 6:41 PM
​ကျေး​ဇူး​ပါ​ပဲ ​အ​ကို ​ညီ​လည်း ​ဒီ​ပြ​သ​နာ​တက်​နေ​တာ ​အ​ခု​တော့ ​အို​ကေ​သွား​ပါ​ပီ ​အ​ကို့​ကို ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​ဗျာ...။
thiha March 28, 2012 at 12:53 AM
​အ​ကို​ရေ ​ကျ​နော်​စက်​ကိုvietual head dick ​ခွဲ​ပြီး​ဘယ်​လို​ပြန်​ပေါင်း​ရ​မယ်​မ​သိ​လို​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​ဗျာ
​နောက်​ပြီး download​ဆွဲ​ပြီးwindow 8 ​တင်​တာwindow ​က ​တက်​တာ​အ​ရမ်း​ကြာ​တယ်.
Kyaw April 2, 2012 at 1:00 AM
​အစ်​ကို photoshop ​တစ်​ခု​လောက်​တင်​ပေး​ပါ​ဦး ​ကျေး​ဇူး​ပါ​အစ်​ကို
myozawmin April 12, 2012 at 10:32 PM
myozawmin April 12, 2012 at 10:34 PM
U PhYo LAy June 6, 2013 at 11:51 PM
​အ​ကို​ရေ ​ဒေါင်း​လော့​လင့် ​သေ​နေ​တယ် :(
U PhYo LAy June 6, 2013 at 11:52 PM
​အ​ကို​ရေ ​ဒေါင်း​လော့ ​လင့် ​သေ​နေ​တယ် :(